नेकपाको सचिवालयमै अध्यादेश ढिसमिस ! | Seto Patrika
नेकपाको सचिवालयमै अध्यादेश ढिसमिस !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७१ वर्ष पुगेको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा नेकपाका ९ जना शीर्ष नेताहरु भेला भएका थिए । जनताले बहुमत दिएर सरकार चलाउन पठाउँदा पनि आफ्नै निरीहताका कारण दुःखमा डुबेका सत्तारुढ नेताहरुको अनुहारमा चमक थिएन ।
आखिर, बालुवाटारमा त्यो साँझ के–के भयो ? कुन नेताले के भने ? अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा को–को उभिए ?माधव नेपाल र प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीले घण्टौंसम्म कुरा गरेका थिए । अँध्यारो कोठामा गरिएका ती गुप्त छलफलहरूमा के–के कुरा भए ? दुवैले सूचना लुकाइरहेका छन्
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए । तर, सोमबार साँझको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओली एकाएक ‘अफेन्सिभ’ बने भने उनका आलोचकहरु चाहिँ ‘रक्षात्मक’ बनेर फर्किए ।
प्रचण्ड–माधव खेमामा सचिवालयका बहुमत अर्थात, ५ जना सदस्य देखिन्थे । प्रचण्ड, झलनाथ, माधव, वामदेव र नारायणकाजी एक ठाउँमा भएका कारण उनीहरु बहुमतमा र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा थिए । ९ सदस्यीय सचिवालयको सन्तुलन ५/४ को अवस्थामा थियो ।प्रचण्ड–माधव दुवैले अध्यादेश फिर्ताको माग नगर्नुले कतै शीर्ष तहमै यसबारे मिलेमतो त छैन ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ
बेमौसमी अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न बसेको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गर्ने नेताहरु दुईजना मात्रै भए । हल्का आलोचना गरे पनि उदार रुपमा प्रस्तुत हुने नेताहरु दुईजना देखिए भने प्रधानमन्त्रीलाई दृढ समर्थन जनाउनेहरु केपी ओलीबाहेक तीनजना देखिए ।
अध्यादेशको कडा विरोध नगर्ने तर पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्थ्योसम्म भन्नेहरुको बहुमत देखियो । सचिवालयको यस्तो परिदृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको सचिवालयबाट अब चुनौती रहेन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको पूर्वएमाले निकट एक सचिवालय सदस्यको दाबी छ ।
संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई सच्याउन र लोकतान्त्रिक ढोका खोल्नका लागि दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताएका थिए । आफ्नो निर्णय आम जनमानसमा कति अलोकप्रिय छ र कति विरोध भइरहेको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले मतलब गरेजस्तो देखिँदैनथ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा दृढ रुपमा समर्थन जनाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए । बादलले इतिहासको कालखण्डमा नेतृत्वले अलोकप्रिय नै भएता पनि सहासिक निर्णयहरु लिन सक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहासिक निर्णय लिएको बैठकमा बताएका थिए । यो अध्यादेशलाई बादलले अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए ।नेकपा सचिवालयले नै अध्यादेश प्रकरणलाई ढिसमिस गरिसकेका कारण अब यो विषय चर्कने सम्भावना टरेकाे छ
पूर्वएमाले खेमाका नेताहरु विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल दुवैले पार्टीमा सल्लाह गरेरै गरेको भए हुन्थ्यो भन्दै प्रक्रियागत कुरो उठाएका थिए । तर, उनीहरुले अध्यादेशको समर्थन गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि सचिवालय बैठकमा खासै कडा रुपमा प्रस्तुत भएनन् । अध्यादेश ल्याउनै पर्ने भए पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भन्दै नेता नेपालले यसलाई ‘बाहिर राम्रो मानेका छैनन्’ भने । नेता नेपालले अध्यादेश फिर्ता नै हुनुपर्छ वा यसको औचित्य छैन भनेनन् । ल्याउनैपर्ने भए सल्लाह गरेर ल्याउनुपथ्र्यो भन्दै आफूलाई उदार रुपमै प्रस्तुत गरे ।
अरु बेला बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने वामदेव गौतमले पनि सोमबार साँझको बैठकमा अहिले नै अध्यादेश ल्याउन जरुरी थिएन सम्म भने पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नै गर्नुपर्छ भनेनन् ।
यद्यपि, छलफल अझै नसकिएको र जारी रहने केही नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य छलफल गर्नु अनि सोमबार साँझ भएको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड–माधव दुवैले अध्यादेश फिर्ताको माग नगर्नुले कतै शीर्ष तहमै यसबारे मिलेमतो त छैन ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।
Prevअस्ट्रेलिया अमेरिकाको सुगा बनिरहेको चीनको आरोप
Nextआरआर क्याम्पसमा अनलाइन पढाइ सुरु